भोट माग्ने अनौठो तरिका देखेपछि जनता चकित, फोटो भयो भाईरल — Imandarmedia.com
भोट माग्ने अनौठो तरिका देखेपछि जनता चकित, फोटो भयो भाईरल
सिन्धुपाल्चोक। जनप्रतिनिधिहरुले भोट माग्न पैसाको विटा फाल्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका– १० का वडा अध्यक्षका कांग्रेस उम्मेदवारले हजारको नोट मतदाताको पाउमा राख्दै भोट मागेको तस्बिर यतिबेला भाइरल भएको छ।
तस्बिरमा उनले पैसा राखेर मतदाताको खुट्टामा ढोगेको देखिएको छ। यो तस्बिरले यतिबेला उनको चर्को आलोचना भएपछि उनले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले आफूले आफ्नो फुपुको मात्र खुट्टा ढोगेको र हिन्दु परम्पराअनुसार दक्षिणा दिएको बताएका छन्। उनले अरु व्यक्तिहरुलाई त्यसरी दक्षिणा दिने काम नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपी उनले फुपुको खुट्टा ढोगे पनि फुपु स्वयं मतदाता भएकाले चुनावको मुखमा यसले राम्रो सन्देश नदिने पनि टिप्पणी भइरहेको छ। तर उनले आफ्नी फुपु सो वडाको मतदाता नभएको पनि बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, आफ्नो संस्कृती, हिन्दु परम्पराअनुसार आफ्नो फुपुको खुट्टो ढोगेपछि दक्षिणा दिने चलन परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको हो। चुनावको समयमा यसलाई भ्रम छर्न विभिन्न आरोपका साथ विपक्षीले प्रपोगाण्डा बनाउनु नौलो कुरा र नौलो विषय हुदैँ होइन।
कांग्रेस एकमात्र यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण र सम्मान गर्दै आएको छ। म मेलम्ची वडा नं. १० का कांग्रेस पार्टीबाट उम्मेदवारको रुपमा चुनाव अभियानसहित घरदैलो कार्यक्रमा फुपूको घर पुग्दा आशिर्वाद लिएको हुँ।
फुपूले आशिर्वाद दिएपछि मेरो परम्परा अनुसार खुट्टा ढोग्दै दिदीलाई दक्षिणा दिनु गलत हो? उनी थप भन्छन्,‘मेरो परम्पराले फुपुले टिका लगाएपछि खाली हात राख्दैन।
तपाँई आफ्नो घरको परम्परा र संस्कृति सम्झनुहोस्? म एक हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिको लागि के यो गलत परम्परा हो? आफ्नो फुपू बाहेक अन्यत्र कतै पैसा दिएको प्रमाण दिन सक्छ कसैले ?
र फूपू पनि मेलम्ची नगरपालिका वडा नं १० को मतदाता नभएको पनि जानकारी गराउँछु। यसलाई भ्रम छरेर गतल सूचनाको आधारमा तथ्य विहीन समाचार सम्प्रेषण नर्गनुहुन सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उप-मेयरमा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वारी दिएकी सुनिता डंगोलले आफूले चुनाव जिते महिलाहरुलाई महिनावारी बिदा दिने बताएकी छन्।
काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा डंगोलले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा महिलालाई असह्य पीडा हुन्छ, कार्यालय जान गाह्रो हुन्छ, बिदा दिन नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछु’।
महिलाहरुलाई कार्यकक्षमा सुरक्षित हुने वातावरणका लागि प्रबन्ध मिलाउने समेत उनले बताइन्। यस्तै, समान ज्यालाका लागि पनि आफूहरुले आवाज उठाउने उनको भनाई छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेले सबैभन्दा पहिले पोखरा महानगरको मेयरमा दीपक पौडेललाई टिकट दिय। उनलाई मेयर दिएपछि उपमेयरमा हालकै मन्जुदेवी गुरुङलाई दोहोर्‍यायो ।
पौडेलले टिकट पाएपछि एमालेकै नेता कार्यकर्ताले विरोध गरे। पुराना भिडियोहरू हालेर बेइज्जत गरिदिए ।गुटले गाँजेको एमालेबाट पौडेलले पाएको टिकट खोसियो।
उनको ठाउँमा बहालवाला प्रदेश सांसद कृष्ण थापालाई टिकट दिइयो।मन्जु सोही पदमा दोहोरिइन् । अघिल्लो दिनसम्म कुनै हालतमा उपमेयर चुनाव नलड्ने बताएकी मन्जु थापाले मेयर टिकट पाएपछि लड्न राजी भइन् ।
थापा र गुरुङ पोखरामा केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारी गुटका हुन् ।पौडेल भने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निकट हुन् ।
लामो समय अध्यापन गराएर सक्रिय राजनीतिमा लागेका पौडेलको टिकट खोसिएन मात्रै उनी घरबाट निस्किनै नसक्ने गरी प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भयो । उनका आफन्तहरूले तत्काल घरबाट ननिस्किन आग्रह गरेको बताइएको छ ।
हुन पनि टिकट खोसिएकै दिनदेखि पौडेल चुनावी प्रचारमा छैनन्, उनी घरमै आराम गरेर बसिरहेका छन् । पौडेललाई भेट्न केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पुरुन्चौर पुगेका छन् ।
पौडेलले अपमान महसुस गरेका कारण प्रचारमा नलागेको बताइएको छ ।पार्टीले अन्याय गरेको पौडेलले पोखरेललाई गुनासो गरे । करिब २ घण्टा गोप्य भेटपछि पौडेलले पोखरामा एमालेले चुनाव नहार्ने आश्वास्त पारेर फर्काएको एमाले श्रोतले जनाएको छ । ‘
उहाँसँग धेरै गुनासा थिए । ति गुनासा राख्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘अन्तिममा एमालेले पोखरामा चुनाव जित्ने र त्यसमा निश्चिन्त रहन भन्नुभयो ।’ पोखरेलले पौडेलको योगदान पार्टीले नभुल्ने विश्वास दिएर फर्किएका छन् ।